LG Watch Urban ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ | Androidsis
Francisco Ruiz | | LG, UHI, reviews
နာမည်ဆိုးများဟုခေါ်သောအမည်သစ်များသည်ငါတို့မျက်စိထဲသို့ရောက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် Android operating system နှင့်အတူသမားရိုးကျ terminals ထုတ်လုပ်သူများလိုက်နာနေသည့်လမ်းကြောင်းများကိုတွေ့မြင်နေရသည်။ ကျောက်တံတား, စမတ်နာရီများ o စမတ်နာရီ.
Android Wear operating system နှင့်အတူပထမဆုံးစမတ်နာရီများ၏ပထမဆုံးမော်ဒယ်များထွက်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှအရာများသည်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားသည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ LG ၏စွန့်စားနိုင်သောအလောင်းအစားသည်ဤနေရာတွင်ကစားခြင်းဖြစ်သည် LG Watch Urban, ကိုရီးယားနိုင်ငံစုံ၏စမတ်နာရီသစ်၎င်းသည် Android Wear operating system ကိုဂူဂဲလ်မှအထူးသဖြင့်ဤအမျိုးအစားအမျိုးအစားအတွက်၊ operating system အတွက်ဖန်တီးထားခြင်းကိုစွန့်လွှတ်သည် WebOS ။
1 LG Smartwatch Urban ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
LG Smartwatch Urban ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ပုံစံ Smartwatch မြို့ပြ
operating system ကို WebOS ပါ
ဖန်သားပြင် ၃.၃ လက်မအရွယ် P-OLED ၃၂၀ x ၃၂၀ resolution နှင့် ၂၄၅ ပစ်ဇယ်လ်သိပ်သည်းမှုနှုန်းရှိသည်
Processor ကို 400'1Ghz တွင် Qualcomm Snapdragon 2
သိုးထီး 1 Gb
ပြည်တွင်းမှတ်ဉာဏ် (ရွမ်) 4Gb
အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များ ရေစိုခံလက်မှတ် IP67-PPG နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာ -barometer-gyroscope-accelerometer-compass
အစီအမံ 5'5 x 52'2 x 10'9 မီလီမီတာ
စြေး ယူရို ၅၀၀/၆၀၀ တရားဝင်အတည်ပြုခြင်းမရှိပါ
ယင်းကြောင့် LG Watch Urban WebOS ကိုအခြေခံသော operating system ကိုအသုံးပြုသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏ Android Wear ကို uncheck လုပ်ခြင်းကို၎င်းသည်ကွဲပြားသောနည်းနှစ်နည်းဖြင့်ဆန်းစစ်နိုင်သည်။ သူတို့ထဲကပထမ ဦး ဆုံးကတည်းကအနုတ်လက္ခဏာရှုထောင့်အားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ် သင်သည် Android Wear Wareables သို့မဟုတ် smartwatches နှင့်လိုက်ဖက်သော apps များအားလုံးဆုံးရှုံးသွားသည်။ အချို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ အနည်းဆုံးအားဖြင့်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အားကစား application တစ်ခုထက်သာလွန်ပြီးအချို့သောအခြားနာရီကြည့်ရှုသည့်အသားအရေအချို့ကိုအချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲရန်ပြုလုပ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည့်အခိုက်အတန့်၌ရှိကြောင်းသိရခြင်းကကောင်းသည်။ အမျိုးမျိုးသော chorraditas ကြိုးစားချင်တယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြုသဘောဘက်တွင်လည်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ပြီးစဉ်းစားပါက ပို၍ ဖြစ်သည် semicircle ၏ပုံသဏ္iconာန်အိုင်ကွန် mode တွင်ကောင်းသောနှင့်အသစ်သော interface ကို အမှန်တရားဟာကျွန်တော့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပင်လယ်လို့ထင်နေပုံရတယ် Android Wear နဲ့တော်တော်လေးကွဲပြားခြားနားတဲ့ interface တစ်ခုကိုငါကိုယ်တိုင်နှစ်သက်ခဲ့ပြီးအံ့အားသင့်ခဲ့တယ်။
ပြီးအောင်လုပ်ဖို့၊ အောင်ပွဲရမယ်၊ LG Smartwatch Urban ၎င်းကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းကြောင်းသင်ကိုယ်တိုင်ပြောပြပြီးပြီဖြစ်သော်လည်း LG သူငယ်ချင်းများသည်တပ်ဆင်ရန်နှင့်ပျော်မွေ့နိုင်ရန်အတွက် application အသစ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အားပေးသောစိတ်ဆန္ဒနှင့်အားထုတ်မှုအပေါ်များစွာမူတည်လိမ့်မည်။ ယနေ့အကောင်းဆုံးစမတ်နာရီများထဲမှတစ်ခု.
ကြီးမားသော 700 mAh ဘက်ထရီ
စျေးနှုန်း / အရည်အသွေးအချိုးအစား
ကိုယ်ပိုင် application များမရှိခြင်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG Watch Urban ကို Android Wear မပါဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနာရီ
Android 5.0 Lollipop တွင်ပုံမှန် data encryption ကို Google ကလျှော့ချလိုက်သည်